पश्चिमी शैलीमा हुर्केका नेपाली युवा अमेरीकामा “गीता” पढ्दै! | पहिलो बोली
पश्चिमी शैलीमा हुर्केका नेपाली युवा अमेरीकामा “गीता” पढ्दै!
१२७६९ पटक पढिएको
केहिँ दिन पहिले मैले रीवाजलाई सोधे, “कोरोनाले उपलब्ध गराएको यस मुल्यवान समयको सदुपयोग कसरी गर्दैछस छोरा ?”
हरेक कुराहरुका सकारात्मक पक्षहरु खोज्ने मेरो प्रयासस्वरुप नै कोरोनाको यस कहर भित्र पनि सकारात्मक उपलब्धि खोज्ने प्रयासमा नै त्यसरी प्रश्न गरेको थिए मैले !
“यस मुल्यवान समयको सदुपयोग गर्दै मैले गीता पढ्न शुरु गरेको छु बाबा” रीवाजले सहजै उत्तर दियो !
मैले धेरै पटक पढ्न शुरु गरेर पनि अन्त्य छिचोल्न नसकेको त्यो किताव कता राखेको थिए कुन्नि, तर उसले खोतल-खातुल पारेर निकालेछ !
२०१७ तिर न्युयोर्कस्थित पुरानो ट्वीन टावर अगाडी रिवाज खनाल
“मृगमरिचिकाको अर्थ के हो ?
सत्त्व, रज र तम भनेको के हो ?
सच्चिदानन्द भनेको के हो ?
वर्णाश्रम भनेको के हो ?
देहान्तरण भनेको के हो ?
प्राण, अपान, व्यान, समान र उदान भनेको के हो ? ”
( माथिका यी सबै प्रश्नहरु उसैले नेपालीमा लेखेर पठाएको जस्ताको तस्तै कपी पेष्ट मात्रै गरेको हुँ मैले यहाँ )
“नेपालीमा भन्दा अंग्रेजीमा लेखेको गीता बुझ्न सजिलो हुन्थ्यो होला नि छोरा तँलाई..!” हरेक पेजमा भेटिने नयाँ नयाँ नेपाली र संस्कृत शब्दहरुको अर्थ नबुझेर मलाई लेखेर पठाईरहँदा उसको मन बुझ्न मैले यो सल्लाह दिएको थिए !
आजभन्दा एक दशक पहिले १३-१४ बर्षको कलियो उमेरमै अमेरिका आएर हाईस्कुल र कलेजको पढाई अँग्रेजी माध्यममा सकेर जीवनशैली समेत अमेरिकी शैलीमा व्यतित गरिरहेको उसले भन्यो “मैले नेपालीमै पढ्न चाहन्छु किनकी मलाई नेपाली पढ्न र लेख्न राम्रोसँग आउछ ! र अझै धेरथोर संस्कृतकै श्लोकहरु पढेर अर्थ खोज्ने प्रयास पनि गर्दैछु ! गीतालाई नेपाली वा संस्कृतमा पढ्दा जुन परिवेश अनुरुपको भावार्थ बुझ्न सकिन्छ त्यो भाव अंग्रेजीले व्यक्त नगर्न सक्छ किनकी अंग्रेजी अनुवादमा मीठो शब्दार्थ त पढ्न सकिएला तर भावार्थ होईन बाबा !”
उसको कुरा निकै अर्थपूर्ण थियो ! तर मलाई पनि सबै शब्दहरुका अर्थहरू त कहाँ आउथ्यो र, तैपनि सक्दो प्रयास गरी अर्थ खोज्थे र उसलाई दिन्थे ! नढाटि भन्नुपर्दा त्यहिँ बहानामा कतिपय नयाँ कुराहरु सिक्ने मौका मिल्यो मलाई पनी।
२०१२ तिर अमेरिकाकै वसिंगटनमा वुवासंग रिवाज खनाल
हरेक दिन लामो कुरा हुन्छ हामी बाउछोरा बीच ! आजकल उसले पढेका गीताका एक एक अध्यायहरुको ब्याख्या गर्ने गर्छ मलाई ! आफैले पढ्दा ध्यानकेन्द्रित गर्न नसकेको गीता छोराबाट सिक्दैछु आजकल ! कतिपय कुराहरु अरु सबैलाई सिकाउदै हिड्ने म उसको कुरा सुन्दा भने चुप रहन्छु किनकी उसँग धेरै कुराहरु सिकिरहेको हुन्छु मैले ! उसको राम्रो बानी के छ भने जे मा लाग्छ निकै लगावका साथ लाग्छ ! त्यसैले उसको अध्ययन गहन हुन्छ ! हाम्रा बच्चाहरुमा हामीहरुमा भन्दा फरक र सृजनशील धेरै ज्ञानहरु हुन्छन, त्यसलाई सुनेर सिक्ने प्रयास पनि गर्नुपर्छ हामीहरुले ! हामीहरु धेरै जान्ने र उनीहरु कम जान्ने छन भनेर कहिल्यै पनि सोच्नु हुँदैन ! उनीहरुबाट सिक्ने धेरै कुराहरु हुन्छन, जुन कुरा मैले राम्ररी अनुभव गरेको छु र प्रयोगमा पनि ल्याएको छु !
हामी बाउछोराबीच निकै तर्क बितर्क पनि हुन्छन बेला बेलामा ! उसले जानेका कुराहरुलाई अझैँ सहज र बिस्तृत अर्थ आउने गरि ब्याख्या गरिदिने प्रयास पनि गर्छु मैले ! अझ भनौ उसको ज्ञानलाई अझै बढी तिखारीदिने प्रयास गर्छु मैले ! मैले बोलिरहँदा उसले निकै ध्यान दिएर सुन्छ पनि ! यस्तै कुरा भैरहँदा केहि दिन पहिले उसले मलाई अचानक भन्यो, बाबा एउटा कुरा भन्छु ध्यान दिएर सुन्नु है ..! मैले भने “हुन्छ ल भन्नु !”
” कतिपय मान्छेहरुले पद र पैसा आर्जन गर्न कति अन्याय, अत्याचार, बदमासी एवं अपराधजन्य कामहरु पनि गर्छन र धेरै सम्पति र ठुला ठुला पदहरु आर्जन गर्न सफल पनि हुन्छन ! तर आफु मारेर जाँदा भने आफुले आर्जन गरेको त्यो पद र पैसा यहिँ छाडेर जान्छन भने आफुले पद र पैसा आर्जन गर्न गरेका सबै खराब कर्महरु भने आफैले लिएर जान्छन !”
उसको कुरा सुनेर म अवाक भए ..!
अनि अस्ति राती युट्यूबबाट एउटा भिडियो खोजेर मलाई पठायो र भन्यो, ” राम्ररी हेर्नु ल बाबा, अनि त्यस बिषयमा भोली कुरा गरौला, अहिलेलाई शुभ रात्री पिताजी ..!” कहिले काहिँ के मूड चल्छ कुन्नि “पिताजी” पनि भन्छ उसले ! मैले हुन्छ म हेर्छु भने !
भिडियो पश्चिम बंगालको मायापुर भन्ने ठाउँमा अवस्थित गुरुकुलको रहेछ ! जहाँ पश्चिमी देशका समेत धेरै बच्चाहरुलाई पढ्न राखिएको रहेछ !
भोलिपल्ट भिडियोको कुरा हुँदा मलाई भन्यो, “बाबा गुरुकुल शिक्षा अझै पनि अस्तित्वमा रहेछ, मैले पनि भविष्यमा मेरा बच्चाहरुलाई गुरुकुलबाटै शिक्षा शुरु गर्ने सोच बनाएको छु ! केहिँ बर्ष गुरुकुलमा राखेर पढाए पश्चात मात्रै अन्य आधुनिक शिक्षाको लागी स्कुल पठाउदा प्राप्त गर्ने शिक्षा मुल्यवान हुन्छ भन्ने मेरो विश्वास छ ! किनकी संस्कार बिनाको शिक्षामा धेरै पैसा कमाउन सक्ने प्रमाणपत्र त होला तर ब्यबहरिकतामा भने त्यो शिक्षा अपूर्ण नै हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ !”
मैले भने “तेरो बिहे हुनै बाँकी छ छोरा, धेरै पर नसोच न अहिले ! छोरा पाउने कैले कैले , कन्दनी बाट्ने अहिले भने जस्तो कुरा नगर न !”
तर उसलाई जे भनेर उत्तर दिएपनि उसको सोच देखेर भने म भित्रभित्रै औधी खुशी भए !
( अमेरिका जस्तो ठांउमा पढे लेखेको युवाको पूर्वीय सोच भनौं या नेपालप्रतीको उनको स्नेह भनौं,यो लेखले मेरो मनमा चसक्क छोयो!पक्कै पनी यो अहिलेको पुस्ताले अनुशरण गर्नुपर्ने कुरा हो!हामी विश्वका विभिन्न ठांउमा छरिएर रहे पनी,आफ्नो मातृभूमी वा जन्मभूमी लाई एउटा मुटुको कुनामा सजाएर राख्नुपर्छ भन्ने सन्देश यो लेखले दिएको हुनाले यो लेख प्रकाशन गरेको छु।)